Azonao atoro ahy ve ny tranokalam-pifaneraserana 10 ahafahana mividy rohy mandoa vola?
Eny, azoko asehoko anao ireo tranokalam-pifandraisana 10 ambony mba hividianana rohy malaza miaraka amin'ny vintana kely kokoa hananganana saina mena amin'ny Google. Raha ny marina dia tsy zava-dehibe ny fizotry ny organika amin'ny fanorenana rohy voajanahary. Midika izany fa ny mpikarakara webmasters sy ny SEOs matihanina dia vao haingana no nanamarina fa ny fikajan'ny tranonkala tsirairay dia matetika voatarika amin'ny fananganana on-site eo amin'ny 10%. Mandritra izany fotoana izany, ny andiam-pandrosoana amin'ny fampiroboroboana amin'ny aterineto dia miankina amin'ny lahatsoratry ny tranokalan'ny tranonkala iray, momba ny backlinks momba ny kalitao, ary ny habetsahany. Ataovy an-tsaina fotsiny izany - ataovy tsotra izao, ny rohy rehetra ao amin'ny tranonkalanao na ny blôgy dia manome ny "fifidianana" hafa mahaliana kokoa izay heverin'ny Google ho an'ny tenany, ary koa ny sasantsasany amin'ireo fitaovam-pikarohana lehibe raha handrotsaka ny toerana misy azy lisitry ny SERPs.
Mariho anefa, fa ireo rindran-damina dia misolo tena ny tenany ho fomba mahomby sy mahasoa mba hanatsarana ny toerana misy anao ao amin'ny tranonkala amin'izao fotoana izao. Saingy alohan'ny hanehoana ireo topam-pejy miisa 10 miendrika ny fotoananao sy ny ezaka, avelao hiatrika izany - hividy rohy tsara ary ho marina ny tanjona tsara. Na dia mety ho ratsy kokoa aza ny fanaovana izany rehetra izany, fa tsy handraisany ezaka. Izany no antony hanolorako soso-kevitra amin'ny fampiasana azy ireny amin'ny fikarakarana manokana ary hanaovana fanamarinana indroa isaky ny rohy mankany amin'ny tranokalanao na blôginao alohan'ny hiaingana. Ary tsy ilaina ny milaza fa ny fandefasana rohy naloa na volavolan-dalàna (i. f. , sehatra an-tserasera sy tranonkala ho an'ny fifanakalozan-tserasera amin'ny fifandimbiasana, ary koa ireo rindry hafa mifototra amin'ny serivisy izay matetika ampiasaina amin'ny famerenana rindran-tsavily tsy misy kalitaona, ankoatra ny ankapobeny). Noho izany, tadidio fa tsy maintsy mampiasa fotoana ampy ianao amin'ny fanaovana fikarohana tsara alohan'ny hahazoanao rohy karama hafa - eny fa na dia ireo tranonkala miisa 10 ho an'ny daholobe aza. Raha ny marina, ny fivoahana amin'ny fividianana rohy hafa any amin'ny aterineto dia mety ny fandraisana andraikitra tena mampidi-doza indrindra sy mety indrindra.
Top 10 Backlink Sites Sarotra ho an'ny rohy
Links Management - no toerana voalohany anorako anao hitsidika. Noho ny nampiasako ny tolotr'izy ireo amin'ny fananganana backlinks amin'ny tranokalan-tsariko, dia hitako fa mora sy azo itokisana ary azo antoka ny zava-drehetra. Ny fitantanana ny rohy dia tsy mampihetsi-bidy, noho izany dia afaka mividy rindrankajy PageRank tsara amin'ny vidiny mety ianao. Ankoatra izany, ny vidiny ambany dia manomboka amin'ny dolara iray monja.
Postlinks - loharano faharoa hita ao amin'ny lisitr'ireo tranokala 10 lohan-drakitra ahafahana manao safidy tsara. Ao anatin'ireo sehatra matanjaka indrindra amin'ity sehatra ity, afaka miara-miasa aminy ianao amin'ny fandoavam-bola $ 49 eo ho eo. Ny lahatsoratry ny Post dia azo antoka fa azo antoka ny fifandraisana amin'ny mpitantana tsara. Ary maro ireo dokam-barotra any no mitady tolotra tsara amin'ny fividianana rindry avo lenta. Mariho fa raha ny tranokalanao na ny bilaogy dia ampy tsara, dia mety hiantehitra amin'ny maha-mpitory anao ianao. Raha vantany vao mahazo vaovao, kalitao, ary votoatim-pahalalana tsara ianao, dia mila manolotra ny tranokalanao fotsiny. Amin'izany fomba izany, ianao dia mandray anjara amin'ny fananganana antontan-taratasy azo antoka ho an'ny tena mpanjifa mba hahazoana vola. Raha ny marina, resaka momba ny raharaham-barotra, sa tsy izany?
Backlinks dot COM - toerana fahatelo indrindra ho an'ny fividianana rindran-damina amin'ny. Ny tena mampiavaka ity loharanom-baovao ity dia afaka manolotra anao lisitry ny tolotra maimaim-poana azonao amin'ny tranokalan'ny PR na ny manam-pahefana ambony indrindra, ary be dia be ny vohikalan'ny vohikala hafa na blôgy izay mandoa vola ho an'ny backlinks HQ ho tsara. Ny tena zava-dehibe - Backlinks dot COM dia toerana tsara sy azo ampiasaina mba hahazoana raki-drakitra fanampiny ary hampiakarana ny laharana misy anao. Ankoatr'izay, fantatra amin'ny iray amin'ireo tranonkala mpanome rindrambaiko malaza indrindra angamba ny tranokala nicheo, afaka mahazo ny fomba mora indrindra ny fividianana eo amin'ireo tranokalan'ny top 10 top-tsela - mahatsiaro maimaim-poana hahazoana fahombiazana amin'ny carte de crédit, na mampiasa ny kaontinao PayPal manokana.
Black Hat Links - dia ny fitaovana SEO Black-Hat SEO izay afaka manome anao ny rohy rehetra mila anao - amin'ny avo PR, Web 2. 0 misy, vanim-potoana matanjaka, ary fahefana, ary koa ireo famantarana samihafa samihafa, ary mihoatra aza. Araka ny efa fantatrao, ny Black Hat Links dia mpamatsy vola mora vidy ao anaty fonosana lehibe ho an'ireo sarotra be indrindra, fa tsy manome afa-tsy rindran-damina tokana na roa monja amin'ireo rindrambaiko mitandrina kokoa sy ireo tompona orinasa an-tserasera. Anisan'ireo singa mampiavaka hafa, ity fitaovana ity dia afaka manome anao zavatra momba ny antonony an-jatony na roa - manome voka-pandrefesana azo tsaboina tsara ary ahafahana mahita azy rehetra ao anatin'ny ora iray. Ambany ambany - andramo ity fitaovana ity raha tsy hoe za-draharaha amin'ny SEO ianao ary mahatsiaro ho sahisahy be loatra mba haka ny tena loza mety hitranga momba ny fampiasana ny Black-Hat SEO sy ny hafa tsy tena "legal" tricks sy ny tetika hetsika.
Ny Hoth - fitaovana tsara hafa amin'ny fananganana backlinks tanana. Mazava ho azy fa tsy safidy tsara indrindra hita ao amin'ny lisitr'ireo tranokalan'ny top 10 ambony ny The Hoth. Fa tena ilaina tokoa ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny kalitao, ary koa ny fanombohana ny fanombohana ny endriky ny Google. Andramo ity rindrambaiko ity ary manatsara ny fahombiazan'ny vohikalanao. Mariho anefa fa alohan'ny handehanana mialoha, dia ataovy izay hahazoanao ny zava-drehetra. Manoro hevitra mafy aho ny miala amin'ny hetraketraky ny hividianana zavatra goavana, farafaharatsiny manana fanamarinana indroa amin'ny rohy rehetra alohan'ny hiaingana. Ny zavatra dia toy ny rindrambaiko toy ny rindran-trano rindrambaiko loatra, ity fitaovana ity dia mety hanimba ny tranokalanao na ny blôginao. Mba hisorohana ity vokatra mampalahelo ity, manoro hevitra aho fa hanao araka izay azonao atao, indrindra amin'ny voalohany. Indray mandeha indray - mitsambikimbikina ny hamoaka ireo piraofilam-piaramanidina mahazatra tena mahavariana araka izay azo atao dia tsy tokony hanao zavatra. Fa inona no tokony hatao? Ny zava-drehetra dia ny hany ilainao rehetra dia ny misoroka amim-pahasahiana, raha tsy te-hijery ny ahiahiny ianao amin'ny fomba fijerin'ny motera lehibe. Tsy misy olona te-hosazin'ny Google, sa tsy izany? Noho izany, miaraha miasa hatrany amin'ny hetsika tsikelikely - rehefa tsikaritrao fa ny ampahany amin'ny teny fototrao fototrao dia ny fandrosoana tsara indrindra mihatra eo an-tendron'ny SERPs, dia afaka manatsara sy manomboka mividy rohy misimisy kokoa ianao - mandroso tsikelikely ny tanjonao farany ary manara-maso akaiky ny toe-javatra misy anao amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fitaovana fanodinam-bokatra.
Fiverr - fitaovana malaza hafa manome tolotra fananganana rohy amin'ny fandaharam-potoana feno rafitra rafitra. Ataovy ao an-tsaina fa toy ny fitaovana hafa fitaovana fampitaovana, Fiverr mety ho toerana mampidi-doza - dia miahy anao! Aza manadino ny habetsahana rehefa mampiditra ny rohy karamaina vaovao, ary manao fanamarinana indroa hiatrehana ireo traikefa sy ireo olona mendri-pitokisana indrindra.
Asa miasa - no toerana azo antoka indrindra hita eo amin'ny lisitry ny toeram-piarovana. Saingy ny fandriam-pahalemana dia hividy foana vola fanampiny, sa tsy izany? Midika izany fa ny Asa Up dia miompana indrindra amin'ny fiaraha-monina mahaleo tena. Eny, indraindray ny sarany dia mety henjana be, fa ny serivisy dia mbola anisan'ny olona mahay mandanjalanja indrindra amin'ny fanaovana fifanarahana miaraka amin'ny backlinks. Raha manao izany ianao dia ho fantatra foana izay farafaharatsiny.
Ny olona isaky ny ora - no anarana faharoa tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Anisan'ireo singa tena tsara indrindra, ity vondrom-piarahamonina mahaleo-tena ity dia afaka manolotra rohy goavambe ho an'ny PR amin'ny Do Follow manaraka izay rehetra vonona ny handoa ho azy ireo. Mihevitra ny vokatra andrasana avy amin'ireo tranonkala miisa 10 miisa 10 (i. f. , ny fiakarana marina eo amin'ny sehatry ny fikarohana amin'ny tranokala na blôgy tokana), ny olona Per Hour dia manao tsara kokoa ny asany noho ny olon-kafa ao amin'ny tranonkala. Nahoana? Satria ity vondrom-piarahamonin'ny freelancing ity dia ampy fahaizana mba hanomezana ny fiarovana matanjaka mahery indrindra hatrizay, tokony hiaiky aho. Misy an'arivony ireo mpikirakira mahaleotena an'arivony izay mandroso any mba hanome anao ny pikantsary avo lenta avo indrindra amin'ny Do Follow Follow avy amin'ny loharano samihafa manana fahefana ambony sy PageRank, toy ny HuffPost, IBM, The Next Web, ary anarana maro hafa Anisan'ny fantatry ny ankamaroantsika ireo goavam-be eran-tany.
Fividianana Backlinks High-Quality dot COM - fantatra amin'ny hoe toerana mety indrindra hijerena ny tranokalanao na blaogy mitsambikina eo an-tampon'ny SERPs Google. - tahaka ny rocket. Ny tarika lehiben'ny SEO sy webmaster izay milalao maherin'ny 15 taona ao amin'ny orinasa dia afaka manolotra fanamafisam-peo tena manan-danja miaraka amin'ny Do Follow backlinks mivarotra.
Backlinks Rocket - dia tsy anisan'ireo top-tseza 10 foibe fa mpikarakara SEO an'ny sehatra iraisam-pirenena. Manolotra anao fahasamihafana ara-pahalalahana amin'ny fonosana karama amin'ny $ 59 ka hatramin'ny dolara dolara, ny Backlinks Rocket dia afaka manampy anao amin'ny adihevitra faran'izay tsotra - manolotra boribory EDU ho an'ny fivarotana. Ny olona sasany dia mino fa ny fanabeazana tokana dia mihoatra lavitra noho ny 100 mahazatra.
Link Wheel Pro - no safidy fanampiny voasokajy, izay tsy mety amin'ny lisitr'ireo toeram-pivarotana 10 ambony. Mazava ho azy fa mety hampidi-doza ity toerana ity satria manolotra ny habetsaky ny backlinks miorina indrindra amin'ny fifanakalozan-tserasera sy ny sasany hafa tsy mahomby azo ampiharina. Na izany na tsy izany, manolotra fanabeazana sarobidy indrindra sy ho an'ny governemanta mihitsy aza ny Link Wheel Pro dia toa mahafinaritra tokoa ny milalao, sa tsy izany? Raha ny marina dia lalao lehibe foana ny midika ho fandrahonana goavana. Na izany aza, mbola manapa-kevitra ihany ianao Source .